Ireo mpitily 13 tsara indrindra ho an'ny Mac, iza no mpizaha tena tsara indrindra? | Avy amin'ny mac aho
Jose Alfocea | | Mac OS X, Fampiharana hafa ho an'ny Mac
Ianao ve mitady ny browser tsara indrindra ho an'ny Mac? Amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia afaka mahita mpitety tranonkala marobe mifanentana amin'ny OS X. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa Safari hatramin'ny nametrahany azy io ary izy no manome ny fampidirana tsara indrindra amin'ny rafitra iray manontolo. Na eo aza izany dia mbola betsaka ny mpampiasa mankahala an'i Safari amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny mpampiasa Windows manimba Internet Explorer, noho izany dia manolotra anao ny lisitry ny mpitety ambony 10 ho an'ny Mac.
Eny an-tsena dia afaka mahita mpitsikilo marobe marobe isika izay natao hiara-miasa amin'ny rafitra fiasan'ny birao Apple, na dia somary kely kokoa aza ny isan'izy ireo, mazava ho azy raha ampitahaintsika amin'ny isan'ny mpitety tranonkala mifanaraka amin'ny Windows. Nefa na izany aza, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ireo mpizaha tena tsara indrindra ho an'ny Mac izay hanolo ny mpizaha malaza indrindra toa an'i Safari, Firefox, Chrome, Opera ...
Izaho dia manao an'ity lisitra ity ho an'ny mpizaha tena tsara indrindra ho an'ny Mac sy ny OS X izay mihevitra ny safidiko ary manandrana hazavao ny antony izay nitarika ahy hanasokajy azy ireo tamin'ity lamina manaraka ity. Manantena izahay fa aorian'ny famakiana ny lahatsoratra dia afaka misafidy navigateur tsara indrindra ho an'ny Mac na ilay tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao.
1 Safari, ny navigateur tsara indrindra ho an'ny Mac ho an'ny maro
7 Browser torch
12 Rockmelt, ilay mpizaha media sosialy
Safari, ny navigateur tsara indrindra ho an'ny Mac ho an'ny maro
Amiko manokana, raha toa ka mpampiasa iPhone, iPad na iPod touch ianao, ny Safari no mpizaha tena tsara indrindra ho an'ny Mac azonao ampiasaina. Fampifanarahana eo amin'ireo fitaovana mifandraika amin'izany io kaonty io ihany no ahafahantsika mijery ireo maripezoro ary koa ny tantaran'ny MAC misy antsika amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch. Ankoatr'izay, ny fampifanarahana ny lakile sy ny anaran'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny iCloud Keychain dia mahatonga azy io ho safidy azo antoka sy mora indrindra hanana an-tanana ny angon-drakitra rehetra na aiza na aiza misy antsika.
Miasa haingana dia haingana ny Safari ka tsy mieritreritra ny hampiasa browser hafa izay lazain'ny teorika ianao. Safari dia novolavolain'ireo mpamorona mitovy amin'ny OS X, koa fanatsarana tsara kokoa miaraka amin'ny rafitra iray manontolo sy ireo tranonkala samihafa azontsika idirana sarotra ny mikapoka azy ireo. Ho fanampin'izay, avelan'izy ireo koa izahay hanampy ny fanitarana tsindraindray amin'ny tranokala ary ny fialan-tsiny fa tsara kokoa noho izany i Chrome dia tsy mitombina tanteraka.
Na eo aza ny fitomboana miadana izay iainan'ny Firefox, dia mbola mijanona ity browser an'ny Mac ity iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny OS X aorian'ny Safari, izay napetraka tanindrazana. Ny Firefox dia niavaka hatrany tamin'ny fiezahana hiaro ny fitetezan'ny mpampiasa faran'izay betsaka araka izay tratra tamin'ny alàlan'ny fanakanana, araka izay tratrany, ny karazana fidirana amin'ny MAC amin'ny alalany. Tombony iray hafa atolotry ny Firefox antsika ny fahaleovantenany sy ny tsiambaratelo atolony antsika rehefa mizaha, indrindra amin'ny pejin-tranonkala mahazatra toa an'i Amazon, izay manara-maso ny cookies hataonay hahafantatra izay tadiavinay sy ny vidiny nahitanay azy teo aloha.
Ahoana ny fomba hanokafana Terminal amin'ny Mac
Iray amin'ireo fiasa izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo mpijery tsara indrindra ho an'ny Mac dia ny mety hanampiana karazana fanitarana. Raha ny marina dia maro amin'izy ireo no tsy misy afa-tsy amin'ny Firefox nefa tsy mahita ny mifanohitra aminy amin'ny sehatra hafa toa an'i Chrome. Noho ny fampifandrindrana misy eo amin'ireo fitaovana amin'ny Firefox dia afaka manana ny tsoratadidy sy ny tenimiafintsika rehetra amin'ny fitaovana rehetra izay ametrahana Firefox koa isika, na Windows, Android, Linux ...
Sintomy maimaim-poana ny Firefox.
Hatramin'ny vao tsy ela akory izay, ny mpitety tranonkala dia ondry aman'osin'ny Mac finday foana. Ny fanjifana avo lenta ny ekosistra manontolo amin'ny fampiharana izay ampifandraisina foana (Hangouts, Google Drive ...) no nahatonga an'ity browser ity tena aretin'andoha ho an'ny baterinay MacBook. Tsy maninona izay pejy notsidihinao ary na misy Flash izany na tsia, ny mpankafy ny MacBook dia nivadika herinaratra foana tsy nisy antony, noho izany dia nahena be ny fampiasana azy tao amin'ny solosaina finday Apple, fa tsy tao amin'ny Mac's desktop. dia faharoa satria fantatsika fa tsy ho lany bateria isika.
Soa ihany, ny kinova farany an'ny Chrome ho an'ny OS X dia namaha ity olana ity ary ny hafainganan'ny mpankafy ny MacBook dia nijanona tamin'ny ambaratonga sahaza azy, ary koa ny fanjifana bateria, saingy ho an'ny mpampiasa maro dia tara loatra izany ary tsy mbola nanitsakitsaka ny solosaina findainy intsony i Chrome . Chrome, toa an'i Firefox, dia manolotra antsika ny fampifanarahana tsoratadidy eo amin'ireo fitaovana sy teny miafina samihafa, izay ahazoana aina kokoa ny fampiasana azy nefa tsy mila manoratra teny miafina hitondrana azy ireo. Lavitra, ny magazay fampiharana sy fanitarana dia manome fanampiana fanampiny ho anay ho an'ny mpitety anay, fanampim-panazavana izay indraindray mety tsy hamokatra amin'ny alàlan'ny fibodoana ampahany lehibe amin'ny loharanon-karena an'ny Mac.
Sintomy maimaim-poana ny Chrome.
Mandra-pahatongan'ny fanambarana nataon'i Snowden sy ny fomba ampiasain'ny governemanta rehetra, tsy ny Amerikana Avaratra ihany, mba hitsikilo ny olom-pireneny no ampahafantarina ampahibemaso, maro ireo mpampiasa no nifindra tamin'ny tranokala Thor. tsy hamela ny soritry ny fikarohana ataonao ary ho voataonan'ireo valin'ny fikarohana miorina amin'ny toerana misy anao (IP).
Tor dia mifototra amin'ny Firefox izay ahafahantsika manamboatra an'ity browser ity ihany koa hatramin'ny farany ambony. Azo inoana fa rehefa mitsidika tranokala manana dokam-barotra be loatra sy singa manara-maso ny zavatra ataonay ianao dia tsy handeha araka ny tokony ho izy ny browser ary hanery anay hanafoana ny lafiny sasany amin'ny fikirakirana. Ity browser an'ny Mac ity dia mety amin'ny troll, ireo mpampiasa tia mamorona resabe amin'ny pejin-tranonkala notsidihin'izy ireo ary matetika no sakanana amin'ny alàlan'ny IP.
Izaho manokana dia iray amin'ireo mpampiasa mieritreritra an'izany Opera dia tsy afaka nifanaraka tamin'ny fotoana ankehitriny ary tamin'ny farany dia niafara tamin'ny sarany mpampiasa ambany be raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny tsy fisian'ny safidy fikirakirana, ankoatry ny fiasa tsy mandeha amin'ny laoniny indraindray dia nahatonga ny besinimaro hampiato azy.
Opera dia mamela antsika hametraka fanitarana ihany koa hanamboarana ny fivezivezena sy ny fangatahana ambany indrindra hiasa tsara dia ambany dia ambany izy ireo. Safidy tsara ho an'ny fitaovana tsy matanjaka kokoa.
Opera dia azo alaina maimaim-poana alefa.
Maxthon dia safidy tsara raha te hanandrana mpitety hafa ianao. Tsy manolotra zavatra tsy ananan'ny olon-tsotra ho antsika izy io, izay ahafahantsika mampifanaraka ny angon-draketanay amin'ny fitaovana hafa, mitahiry tenimiafina, sahan-drivotra ... Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny resaka fanitarana satria mamela antsika hametraka vitsivitsy amin'ireo fivarotana Firefox sy Chrome ihany. Raha toa ka miavaka ity mpizahatany ity ho an'ny Mac dia ao amin'ny fepetra ilaina ilaina hiasa, satria tsy toa an'i Chrome amin'ny fotoan-tsarany, Maxthon dia tsy mitaky fepetra maro avy amin'ny Mac.
Maxthon dia azo alaina maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Mac App Store.
Browser miorina amin'ny Chromium, toy ny Chrome. Ity no browser tsara indrindra ho an'ny Mac izay ho hitantsika amin'ny fihinanana horonan-tsary sy mozika, saingy mandeha tokoa izy io rehefa mifantoka amin'ny filalaovana mozika amin'ny alàlan'ny browser. Io dia ahafahantsika misintona ireo horonan-tsarimihetsika izay lalaovinay ao anaty tranokala nefa tsy mila mametraka extension hafa toa ny hoe mitranga ao amin'ny Chrome izany. Izy io koa dia mampiditra mpitantana falehan-driaka mety ho an'ireo tia misintona. Miorina amin'ny Chromium, Torch dia mamela ny fametrahana ireo extension rehetra hita ao amin'ny Web Chrome Store.
Ny fampiasana ireo fanitarana, araka ny efa nanamarihako tetsy ambony, dia tsy maintsy atao amin'ny antonony raha tsy izany dia azontsika atao ny mamadika ny browser ho mule sarotra handehanana amin'ny Mac rehetra, na inona na inona endriny. Fanamarihana momba ny fanilo indrindra rehefa manampy fanitarana mihoatra ny efatra izahay. Azo sintonina maimaimpoana ny Touch Browser.
Fake dia navigateur an'ny Mac izay manamora ny mandeha ho azy. Ny sandoka dia mamela antsika hisintona ireo hetsika ataon'ny mpitety tranonkala mba hamoronana kirakiran'ny sary tsy mila interface olombelona. Ny workflows noforonina dia azo tehirizina ary zaraina amin'ny mpampiasa maro kokoa. Fake dia aingam-panahy avy amin'ny Automator avy amin'ny OS X ary fitambarana Safari sy Automator tonga lafatra izay ahafahantsika mifandray amin'ny Internet haingana sy milamina.
Mety ho an'ny mpampiasa mandroso ny sandoka satria hamela azy ireo mandeha ho azy asa rehefa mameno endrika lava sy sary sary. Ny fiasa automatique rehetra an'ny Fake dia ampiasain'ny fitaovana scripting AppleScript an'ny Mac OS X, ahafahana ampidirina ny scripting mandeha ho azy amin'ny lahasa baiko mahazatra hafa.
Ity browser ity, izay tena voafaritra tsara, tsy misy maimaim-poana, sarany $ 29,95, fa afaka isika misintona kinova maimaim-poana hijerena sy hitsapana ny asany.
Yandex, fiaviana Rosiana, no fitetezam-paritry ny mpikaroka rosiana Yandex, tsy nanelingelina nanova ny anarana izy ireo toa ny nataon'i Google tamin'ny fiantsoana azy hoe Chrome. Yandex dia fantatra amin'ny maha iray amin'ireo mpitety tranonkala haingana indrindra an'ny Mac izay azontsika jerena eny an-tsena, miaro antsika amin'ireo tranonkala mampidi-doza izay misy malware ary koa miaro sy mampahafantatra antsika rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ampahibemaso izahay, mba hikarakaranay ny vaovao ampidirinay.
Mikasika ny fanaingoana, Yandex dia mamela antsika hanamboatra ny mombamomba ny mpizaha mba hampifanarahana azy amin'ny tsirontsika, zavatra izay vitsy dia vitsy no azon'ny mpitety tranonkala atolotra ankehitriny. Toy ny mpizaha tany maro hafa, manolotra antsika ihany koa ny fahafaha-mampifanaraka ny browser sy ny angon-drakitra fidirana amin'ny fitaovana hafa, satria azo alaina ho an'ny iOS sy Android koa i Yandex.
Yandex dia azo alaina maimaim-poana.
Nilaza ny mpanamboatra ny Sleipnir Browser fa izy ireo no namorona ity browser ity amin'ny sary sy ny endrika itiavanao azy fa io no fanamorianao ankafizinao, sary kely momba ny pejy misy habeny mety ho hita nefa tsy mamela ny masonay, ny sahan'ny karoka misy safidy, mora ny mahita ilay vakizoro misokatra ilainao amin'izany fotoana izany ...
Sleipnir dia natao hahay fehezo ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fihetsika amin'ny Track Pad na Magic Mouse, mamela ny fihetsika mahazatra miakatra sy midina hifindra manodidina ny pejy izay tsidihinay. Izy io dia manana hitsin-dàlana fitendry mba hanafainganana ny fivezivezena, hany ka tsy ilaina akory ny totozy raha te hivezivezy tsara. Ity browser ity dia manome antsika fahafaha manokatra tabilao 100 isan-karazany, izany dia raha mihena be ny fampisehoana rehefa manokatra takelaka ianao.
"Vivaldi" dia iray amin'ireo mpijery Mac indrindra, na izany aza, manana traikefa lehibe izy io satria novolavolain'ny orinasa Vivaldi Technologies, izay noforonin'ny mpanorina sy ny CEO taloha an'ny "Opera" (mpitety izay efa hitantsika etsy ambony ) Jon Stephenson von Tetzchner.
Izy io dia mpitety tranonkala maimaim-poana miaraka amina fikitika "reaction" rehefa mipoitra toy ny fanehoan-kevitra amin'ny tetezamita nataon'i Opera avy any Presto ka hatrany Blink, noho izany ny teny filamatra misy azy ankehitriny dia "Browser for our friends".
"Vivaldi" dia mpizaha tranonkala ho an'ny Mac natao ho an'ireo mpampiasa mandany ora maro amin'ny fitetezana ny harato, noho izany dia faritana hoe “Manokana, manampy ary malefaka”, Ary ny marina dia izay. Azonao atao, ohatra safidio ny toerana misy an'ireo kiheba eo an-tampony, any ambany na amin'ny iray amin'ireo sisiny, ary azonao atao ny manapa-kevitra ny toerana misy ny bara. Ho fanampin'izay, azonao atao koa ampanjifaina fihetsika miaraka amin'ny totozy, ny bika aman'endriny, fitambaran-kitendry sy ny sisa
Anisan'ireo asany sy fiasa miavaka indrindra azontsika atao ny manondro fa manolotra izy iray amin'ireo fitetezana tantara matanjaka indrindra miaraka amin'ny statistikan'ny fampiasana izay aseho amin'ny fomba hita maso be, ny fahaizana mijery tranonkala mora foana sy mahita rohy, ary maro hafa. Izy io koa dia manana mahasoa fanamarihana tontonana izay ahafahanao mametaka ny lahatsoratra mahaliana anao indrindra, manampy rohy ary koa sary, mahery mpitantana tsoratadidy izay hanamora ny fampiasana azy na inona na inona ny habetsany, ny asany "Fametahana kiheba", sns.
Azonao atao ny misintona Vivaldi ho an'ny Mac maimaim-poana ao amin'ny tranonkala ofisialiny.
Rockmelt, ilay mpizaha media sosialy
"RockMelt" dia fitetezam-paritra ho an'ny Mac natao manokana ho an'ireo mpampiasa izay mizaha be amin'ny alàlan'ny tambajotran-tseraserany, indrindra amin'ny FaceBook. Miorina amin'ny browser Chrome an'ny Google, manana tombony i RockMelt fampidirana haino aman-jery sosialy ary fanaraha-maso manokana mba hananan'ny namanao "akaiky" 24 ora isan'andro. Misy koa a chat bar, azo atao ny manampy tambajotra sosialy, manavao ny satananao mivantana avy amin'ny fifehezana ny habaka sy maro hafa.
Araka ny efa nolazainay, tranokala mifototra amin'ny Chrome izy io ka ao anatin'izany ny heriny, ny fahombiazany ary ny asany rehetra, miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fampidirana ireo tambajotra sosialinao.
Azonao atao ny misintona RockMelt ho an'ny Mac maimaim-poana eto.
"Flock" dia mpizaha tranonkala natao ho an'ny sehatra maro, ao anatin'izany ny Apple's Mac. Amin'ny maha motera sary azy dia mampiasa Gecko izy, izay mitovy amin'ilay ampiasaina ao amin'ny Mozilla Firefox, ary ny tombony na ny mampiavaka azy indrindra dia ny fampidirana matanjaka amin'ireo serivisy manan-danja toy ny Facebook, Twitter, Flickr na YouTube. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa Flock dia afaka mirehareha amin'ny fidirana haingana sy mivantana amin'ireo serivisy ireo.
Ny mampiavaka azy iray hafa dia ny sidebar andiany, hany ka azo faritana ho andry lehibe an'ity tranonkala ity. Sehatra iray ahafahan'ny mpampiasa miditra mivantana amin'ny RSS feeds sy Favorites.
Saingy tsy izy rehetra izany satria i Flock koa dia manana:
Ny fahaizana manoratra bilaogy vaovao sy tranokala ao amin'ny WordPress, Livejournal na Blogger na dia tsy mifandray amin'ny Internet aza ianao amin'izany fotoana izany.
Mahery clipboards an-tserasera ahafahanao mitahiry lahatsoratra, rohy, sary mifandraika aminao mba hijerenao na hampiasainao avy eo.
Ny safidy herinaratra mizara sary ao amin'ny Facebook na Flickr nefa tsy mila miala amin'ny browser.
Azonao atao ny misintona ny tranokala Flock maimaim-poana eto.
Eto ianao dia manana andiam-pifandimbiasana tsara rehefa mizaha ny tranonkala toy ny fenitra ampidirin'i Apple ao amin'ny solo-saininy Mac, manomboka amin'ny sasany malaza sy malaza toa an'i Firefox, Chrome na Opera, hatrany amin'ny hafa tsy dia fantatra loatra nefa miaraka amina endrika minimalista, intuitive ary feno asa , hery sy fampisehoana, toa an'i Vivaldi na Tor. Safidinao izao, iza amin'izy ireo no safidinao?
Taona vitsivitsy lasa izay dia nanana karazany hafa lehibe kokoa isika, saingy maro ny mpitsikilo no nijanona tsy manavao intsony Camino, ny hafa toa Rockmelt novidian'ny Yahoo, ondry Manova ny tanjony stratejika izany ary tsy fantatsika ary raha hiverina miaraka amin'ny tranokala ho an'ny Mac izy. Mpijery ny fiposahan'ny masoandro nitsahatra tsy nisy ary tsy manana tranokala amin'izao fotoana izao.
Hanampy bebe kokoa an'ity lisitra ity ve ianao? Inona no ho anao the browser tsara indrindra ho an'ny Mac?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Browser ho an'ny Mac
Izaho manokana dia nanandrana mpitsikilo marobe tamin'ny MacBook Air-ko, ny tena nahasarika ahy indrindra dia i Crome noho ny fandikana azy, saingy vetivety dia tsy maintsy niverina tany Safari aho, noho ny fihetsika tsy ananan'ny ankamaroan'ny Crome.
Manaiky tanteraka. Chrome dia ambony amin'ny lafiny maro, fa ny fihetsik'i Safari ao anaty finday marobe dia tsy voavidim-bola. Tiako ny mihazakazaka rantsan-tànana roa amin'ny trackpad mba hihemotra, ohatra.
ny maty anao dia hoy izy:
Hatramin'ny androany, misy ny fisehoana ary ny chrome dia naka ny safari tamin'ny mac. Nahatratra ny sokitra ilay sokatra.
Valio ireo maty anao
Mampiasa Firefox sy Thunderbird aho amin'ny mailaka amin'ny Mac ary amin'ny PC ihany koa. Ny toerana tokana ampiasaiko Safari dia amin'ny iPad. Antony? Fahatokisana, filaminana, fanaingoana. Tsy matoky na inona na inona aho, fa tsy misy na inona na inona momba an'i Chrome na i Big Brother Google ary ny fahavononany haka sary maro kokoa nefa tsy fantatrao.
BF BF (@chaficbaw) dia hoy izy:
Angamba mety hihazakazaka somary haingana kokoa ny iray noho ny iray hafa, saingy ny fampiasana "fihetsika" amin'ny trackpad dia tsy misy ilana azy, ny traikefa fitetezana tsara indrindra. miarahaba misaotra amin'ny naoty.
Mamaly an'i Chafic BG (@chaficbaw)
fitsingerenan'ny andro nahaterahana dia hoy izy:
azonao atao ve ny mametraka ny browser Rosiana Sputnik amin'ny Mac?
crireybar dia hoy izy:
Salama, manana fanontaniana aho. Tsy manavao ny Mac intsony i Chrome ka misy pejy maro izay tsy azoko idirana. Ny rafi-piasako dia toy izao: OS X 10.8.5. Tsy avelany hanavao azy io aho, na hametraka Firefox ... Ary tsy haiko hoe maninona no tsy mandeha amiko ny Safari! 🙁
Valio i crireybar
Ane dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy dia mitranga amiko ary tsy haiko ny mamaha azy, nahavita zavatra ve ianao? fiarahabana
Mamaly an'i ane
Fantatrao ve raha misy ny motera fikarohana mifanaraka amin'ny Mac?
Peponet dia hoy izy:
Firefox Quantum (kinova 57) mandrakizay!
Valiny amin'i Peponet
Anne Swan dia hoy izy:
Tsy afaka manokatra pejy maro amin'ny Mac intsony aho noho ny teo aloha ary manana safari aho, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Anne Swan
Tsy nahalala vitsivitsy tamin'ireo lisitra aho, tsy maintsy manandrana azy ireo aho satria tsy tiako ny Safari toy ny taloha ...
Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia misy tranonkala iray hafa misy lahatsoratra tena ilaina miresaka momba an'io. http://www.descargarotrosnavegadores.com
Manantena aho fa misy olon-kafa hanampy, misaotra ary mankasitraka indrindra!